ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာ စက်ရုံတချို့ပိတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ရာနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့် နေရပ်မပြန်နိုင်ဘဲ အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။
“တွေ့ရပါတယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အာဖရိနိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်တွေနဲ့ ကြိုနေတာတွေ၊ ဒါပေမဲ့ အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာက ဒီဂျော်ဒန်…… သူတို့တွေ မသိလို့လားပေ့ါနော် အရမ်းခံစားရတယ်…. (ရှိုက်သံ)…. ရက်တွေများလှပါပြီ။ အဲ့လိုမျိုး တလပြီးသွားလို့ နောက်တလ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက် ရောက်နေသလိုကို ခံစားရတယ်။ ကယ်ပါ ယူပါ ဘယ်သူ့ကို ခေါ်ရမှန်းလည်း မသိဘူး”
မပိုပို ပြောသွားခဲ့တာပါ။ သူဟာဆိုရင် ကော်ဝါအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ အခုဆိုရင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာ ၃ လ နီးပါးရှိပါပြီ။ ဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်တခုမှာ ရပ်တည်ဖို့ အတော်လေး ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျမဆိုရင် အပြင်ဆောင်မှာ နေတဲ့အတွက် အိမ်လခပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၄ လပိုင်းထဲက မပေးနိုင်တာ ဒီ ၆ လပိုင်းဆိုရင် ၃ လ ပြည့်သွားပြီ။ လုံးဝမခံစားနိုင်တော့ဘူး။ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လို အကူအညီတောင်းရမလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ဒီနေ့မှသာ သူငယ်ချင်းတွေက ပေးလို့ (RFA) နဲ့ အဆက်အသွယ်ရတာ အတိုင်းမသိ အရမ်း ဝမ်းသာမိတယ်။”
ဒီလို ဒုက္ခမျိုးကြုံနေတာ မပိုပိုတယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အနည်းဆုံး ၈ဝဝ လောက်ရှိပါတယ်။ ကော်ဝါစက်ရုံကတော့ အလုပ်နှုတ်ထွက်စာ အတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ ကိုထွန်းက ပြောပါတယ်။
“အခု ကျနော်ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်က ဘယ်သူ့ကို ဆရာခေါ်လို့ ဘယ်သူ့ကို အဖေခေါ်ရမှန်း မသိဘူးပေ့ါနော်။ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးရမှန်းမသိတဲ့ အဆင့်မှာ ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ အစ္စရေးလ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကိုလည်း ကျနော်တို့ စာတွေပို့ဖူးတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေကို တင်ပြဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံအလုပ်သမားတွေကို အဖက်မလုပ်ဘူး။ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ တချို့ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်တာရှိတယ်။ ကျနော်တို့လည်း အဲ့လောက်အဆင့်ထိကို ဖြစ်နေတာ။ ငါတို့တွေသာ ဒီမှာ ကြာကြာနေရမယ်ဆိုရင် များများမပြောဘူး နောက်တလနေရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မိမယ့် အဆင့်ထိ ဖြစ်နေတာပါ။ အင်မတန်မှ စိတ်တွေ ဆင်းရဲနေရတယ်ခင်ဗျ။ စားရေးသောက်ရေးကအစ”
အစ္စရေးလ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးရဲ့ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ - နေရပ်ပြန်လိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အစိုးရက ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ ပြန်ခေါ်ဖို့ စီစဉ်နေပြီး၊ ဆုံမှတ်ဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်းနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကို မိမိအစီအစဉ်နဲ့ အချိန်မီလာကြဖို့၊ လေယာဉ်ပြေးဆွဲမယ့် အခြေအနေကို MNA မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းကို စုံစမ်းဖို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူတွေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုရဲ့ ပတ်စ်ပို့တွေကို အလုပ်ရှင်က ဆက်ပြီး သိမ်းထားတာပါ။ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့် နေရပ်ပြန်ဖို့ကတော့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ကတော့ မြန်မာသံရုံးနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက မြန်မာအလုပ်သမား တာဝန်ခံတွေနဲ့ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာ မကြာခင် လေကြောင်းလိုင်းတွေ ပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့ရှိတာကြောင့် ပြန်လိုသူတွေ သံရုံးကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကလည်း အစ္စရေးလ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ အဖြေကိုတော့ စောင့်ဆိုင်းနေဆဲပါ။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ တကမ္ဘာလုံးမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြန်လာချင်ရင် အစိုးရက ပြန်ခေါ်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၃ ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ထောင်ကျော်လောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေ အစိုးရအကူအညီ မျှော်လင့်နေ
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတက်မယ့် လူ ၈၀၀ ကျော်ကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုစတင်